Izixhobo zePlexEarth 2.0 Beta ziyafumaneka-iGeofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Izixhobo Beta Efumanekayo 2.0 PlexEarth
AutoCAD-AutoDeskGoogle umhlaba / imephuyokuzonwabisa
Ngenye imini edlulileyo Ndathetha nabo yezinto ezintsha ezenza ukuba i-2.0 inguqu yePlexEarth Tools ye-AutoCAD iza kuzisa, enye yezinto ezibonakalayo ezibonakalayo endandizibonayo kwiGoogle Earth ngenxalenye yelungu le-AutoDesk Developer Network (ADN). Namhlanje ikhutshwe i-Beta version, u nga khuphela, uvavanyo kunye nento ebalulekileyo kula manqanaba: ingxelo enokwenzeka bugs.
Yintoni entsha kule nguqulo
Kuyathakazelisa ukuba olu hlobo lweBeta lusimahla ngelixa uguqulelo lwentengiso lukhutshwa, -ngokuya koko ndixelelwe- ekuqaleni kukaJuni 2010. Nabani na olalayo akazukukhuphela.
Eyona ilungileyo xa ithelekiswa noko ndikubonile kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo: Ngoku iyafumaneka ngeSpanish nakwezinye iilwimi ezixhaswa yi-AutoCAD enje:
Ewe, le nguqulo ayisebenzi kwi-AutoCAD 2009 okanye ngaphambili, kodwa ngo-2010 nango-2011.
I-AutoCAD® Imephu 3D 2010-2011
AutoCAD® Architecture 2010-2011Ixabiso kunye neelayisenisiAndilazi ixabiso lephepha-mvume, siyokwazi ukuba kude kube nguJuni. Into endiyaziyo kukuba ayizukubakho kuphela enye uhlobo lwelayisensi kodwa iPro kunye neNkulumbuso ziya kuphathwa, ezibonakala zilungile kum ukukala amaxabiso. Ndixelelwe nomnye wabadali bayo, ukuba baya kunika izaphulelo ezizodwa kwabo bakhuphela ingxelo yeBeta kwaye bayibhalise.
Ipro version: Oku kuya kubandakanya iimpawu zokusebenzisana nemifanekiso yeGoogle Earth, izinto ezize kube ngoku andizange ndibone esinye isicelo senza ngokucacileyo:
Yenza umzobo wemifanekiso, mhlawumbi ngaphezu kweengingqi ezixandekileyo, ngaphakathi kwipoloni okanye ngasendleleni.
Ngenisa umfanekiso njengomntu ngamnye, kwandiswa kwendawo ethile.
Ukuthunyelwa kweemifanekiso eziphathekayo kwi-AutoCAD kwiGoogle Earth.
Thumela izinto kwiGoogle Earth
Dweba kumaphuzu e-AutoCAD, iipolgoni okanye iindlela ezithatha i-Google Earth kwimvelaphi.
Digitize ngokuthe ngqo kwiGoogle Earth, kunye nenketho ye-snap, ukudweba kwi-dwg.
Ndiyamangaliswa ngolu hlobo lwenguqulelo, ukususela ngoku kunokwenzeka ukukhuphela umfanekiso kwi-mosaic okanye kusekwe kwi-polygon.
El ividiyo ithunyelwe kwiYutube Kuyenzeka kakhulu, ikwabonisa ukuba ungayikhuphela njani i-raster yendlela yendlela okanye kwindlela (indlela).
Inkokhelo yeNkulumbuso: Kule ndlela, imisebenzi yohlobo lwedijithali iya kudibaniswa, nokuba ikhona neenguqu ezisisiseko ze-AutoCAD, i-PlexEarth Tools idibanisa le mi sebenzi enokwenziwa kuphela kwi-Civil3D.
Amanqaku omhlaba wokungenisa kunye nemigca yeembambano (imizila engqinelanayo)
Yakha indawo, oku kuvela kumaphuzu, iziqendu okanye ukuphakanyiswa kweetekisi.
Ukubalwa kwemitha phakathi kweendawo
Amanqanaba omgangatho, njengoko ku-Civil3D
Ukunikezela ukuphakanyiswa kwamaphupha uze wenze i-3D polylines endleleni.
Amanqanaba omgangatho weelayi, ubungakanani bomhlaba okanye imiqulu.
Kwakhona sinesixhobo sokufunda ulwazi lwe-slope okanye ukuphakama, kunye nommandla okanye umgama ubalwa.
Zomibini ezi zinto zingeniswa kwiGoogle Earth, okanye enye inkqubo, njenge-Civil3D.
Igalelo elikhulu, ngakumbi ekuhlolisweni kwangaphambili
Ewe ewe, kuza nekhompyutheni yakho. Nangona le nguqulelo yeBeta, into ecacileyo ayikakhululwa.
Kuza kubakho incwadana enokufumaneka kwesi sixhobo
I-Beta ifumaneka kwi-AutoCAD 2010 kunye ne-2011 64 bits.